खेलकुदमा राजनीतिकरण::समायोजन खबर
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा सोमबारबाट सुरु भएको होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्ड कपमा व्यापक राजनीतिकरण भएको पाईएको छ । होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्ड कपलाई खेलाडीमय भन्दा नेकपामय बनाएको पाईएको हो । राष्ट्रको गौरव बोकेको खेल क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनु भनेको खेलप्रतिको उत्साहमा खेलाडीको मनोवल कमजोर पारिनु हो । होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग जस्तो सामाजिक संस्थाले उद्धघाटन सत्रमा जिल्लाका नेकपाका नेता तथा यूवा संघका नेतामात्र बोलाएर अन्य पार्टीलाई ओझेल पार्दै कार्यक्रम भएको प्रति धरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
खेलकुदका कार्यक्रममा खेल क्षेत्रकै व्यक्ति बोलाउनु सवैभन्दा उत्तम हो । खेल क्षेत्रकै व्यक्ति बोेलाए उसले कार्यक्रममा राखेका संबोधनले खेलाडीलाई थप उर्जा मिल्ने हुन्छ । राजनीति खेलकुदको ‘बाउन्ड्री’ भन्दा बाहिर हुनुपर्छ । यदि त्यो नसक्दा जिल्लाका कुनै एक माननीयलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर पनि । तर, आयोजक संस्थाले नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल लगायतका अन्य दललाई बोलाएनन् । बोलायो त नेकपाका जिल्ला स्तरका नेतालाई मात्र ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेकपा नेतृ तथा प्रदेश सांसद उषाकला राई, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा पूर्व एमालेका अध्यक्ष ववी चाम्लीङ, नेकपाका जिल्ला सचिव रामप्रसाद दंगाल, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दिपनारायण रिजाल, यूवा संघका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्लास्तरको पार्टीको संगठनहरुलाई बोलाउने हो भने सवै पार्टीलाई बोलाउनुपर्छ । राजनीतिरुपमा सवै पार्टीको सम्मान गर्नुपर्छ, यदी बोेलाएर पनि नजानु फरक कुरा हो । पूर्व एमाले खोटाङका अध्यक्ष ववि चाम्लीङले बताए । उनले भने, ‘मलाई समन्वय प्रमुखको नाताले बोलाएको हो गएर कार्यक्रममा विशेष अतिथि भएर फर्किए ।’ कुनै पार्टीलाई बोलाउँने कुनैलाई नबोलाउने गर्नु हुन्न त्यो गरेको भए कमजोरी हो । आगामी दिनमा समन्वय सहकार्य गर्नुपर्छ राईले भने ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापति नरेशकुमार श्रेष्ठले आफुहरुलाई कार्यक्रममा खवर नगरेको बताए । पार्टीलाई आधिकारीकरुपमा नबोलाएको उनको दावी छ । कार्यक्रम हेर्न गएका पार्टीका गाउँ तहका व्यक्तिलाई आसनग्रहण गराएको भन्ने आएको छ । तर, त्यो पार्टीको आधिकारिकता होईन श्रेष्ठले भने । समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष टंक थापाले भने होलेसुङ–जनकराज संस्था कुनै पार्टीको होईन भन्ने कुरा मैले बुझेको हो । तर, कार्यक्रम गर्दा कुनै पार्टीलाई बोलाउँने कुनैलाई नबोलाउँने गर्नु चाहीँ राम्रो कुरा होईन् । सवै कुरालाई राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होईन । समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिक बोलाईएन । खेलकुदका कार्यक्रम गर्नु राम्रो काम हो । अझै राम्रो बनाउँन ध्यान दिनुपर्छ थापाले भने ।
स्थानीय यूवाहरु असन्तुष्ट
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको च्यास्मीटारमा जारी होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्ड कपमा स्थानीय यूवाहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश नम्बर –१ बाट प्राप्त भएको ३३ लाख रुपैयाँ बजेटबाट च्यास्मीटार–३ मा निर्माण भएको खेलमैदानको सार्वजनिक सुनवाई नगरिएकोप्रति यूवाहरुको असन्तुष्टि रहेको पाईएको हो । यस्तै, होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्ड कपको आयोजक समिति निर्माणमा स्थानीय यूवाहरुलाई नसमेटी पार्टीगतरुपमा गठन गरिएको, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर–३ को वडा कार्यालयबाट वडाको समग्र खेल क्षेत्रमा छुट्टिएको बजेटबाट कसैसँग परामर्श नगरी वडाध्यक्षले होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्ड कपलाई १ लाख दिने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय यूवाहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग समाजिक महत्व बोकेको संस्था पनि पार्टी नीहित हुनु दुखको कुरा भएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर–३ का यूवा रिपेन्द्र राईले बताए । उनले भने,‘ यहाँका सयौं यूवाको खेलप्रतिको उत्साहलाई ओझेल राखेर बलजफतीरुपमा कार्यक्रम गराईयो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ समाजसेवी भनिएका जनकराज राईले समाजसेवाका नाममा आफ्नो नाम अगाडी राखी विभिन्न किसिमका सामाजिक कामहरु गर्दै आएपनि उक्त काम गर्नका लागि संघसस्था र व्यक्तिहरुबाट आर्थिक सहयोग लिने गरिएको पनि पायौं । यसको पारदर्शिताको बारेमा पनि कुरा उठ्नुपर्छ राईले बताए ।
यस्तै, अर्का स्थानीय यूवा भूपाल राईले भने, ‘स्थानीय यूवालाई नसमेटी यहाँका यूवाको सुझाव नलिई बलजफती कार्यक्रम गराईयो, खेलकुदको कार्यक्रममा पार्टीको चुनावी कार्यक्रम जस्तो बनाइयो ।’ होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्डकपको जिम्मा पाएको साकेला सिली फुटबल क्लवका अध्यक्ष कमल चाम्लीङले भने खेलको प्रायोजकहरुलाई प्राथामिकता दिएर अतिथि वोलाईएको बताए । उनले भने, ‘जिल्लाका सवै पार्टीलाई अतिथि बोलाउँदा हुन्थियो, तर, हामीले कार्यक्रमलाई जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरुलाई मात्र अतिथि बोलाएका हौं ।
कार्यक्रमको आयोजना गर्दा स्थानीय यूवाहरुलाई समावेश नगरिएको विषयमा आफुले क्षमायाचना मागीसकेको उनको भनाई छ । अतिथि बोलाउँने विषयमा पनि क्रुटि भएको उनले स्वीकारेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर–३ च्यास्मीटारका वडाध्यक्ष भलराज राईले भने होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्डकपको लागि छुट्टयाईएको १ लाख रुपैयाँ नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘वडा कार्यालयले वडाको समग्र खेल क्षेत्रको लागि ४ लाख बजेट छुट्याईएकोमा ६० हजार खर्च भइसकेको छ । बाँकी ३ लाख ४० हजारले यो खेल गराउँने र बाँकी रहेको पैसाले फेरी वडागत खेलकुद गराउँने भएको छु ।’
खेलका लागि १ लाख रुपैंया नदिने तर वडाको जम्मा रकम ३ लाख ४० हजारबाट होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्डकपमा खर्च गर्ने कुरा वडाध्यक्षले गर्नु वडाको खेलकुद अझै ओझेलमा पार्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । एक लाख नदिने तर, ३ लाख ४० हजारबाट खर्च दिने कुरा वडाध्यक्षको गलत भएन ? प्रदेशबाट प्राप्त ३३ लाखको लागतमा निर्माण भएको खेलमैदानको सार्वजनिक सुनुवाई भने गरिसकेको वडाध्यक्ष राईको दावी छ ।
साकेला सिली फुटबल क्लव, हलेसी तुवाचुङ फुटबल क्लव र सिर्जनात्मक एकता युवा सेवा समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग गोल्डकपमा च्यास्मीटारको सिर्जनात्मक एकता युवा सेवा समाजले आफ्नै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने वातावरण बनाएको थियो । तर, यहि कार्यक्रमले गाउँका यूवा– यूवामा फाटो त ल्यायो नै राजनीतिकरुपमा पनि संस्थालाई नेकपाको ट्याग लगाएको छ । सिर्जनात्मक एकता युवा सेवा समाजका अध्यक्ष रशकुमार राईले भने संस्थामा राजनीतिकरण नगरिएको बताएका छन् । आयोजक समिति गठन गर्दा केही समस्या रहेको उनले स्वीकारेका छन् ।
सहमतिमा भएका कुरा पूरा होलान ?
खेलकुद गर्ने विषयमा विवाद चरम उत्सर्कमा पुगेपछि खेल आयोजक समिति वडा कार्यालय र स्थानीय यूवाहरुवीचमा केही सहमति भएका छन् । प्रदेशको बजेटबाट निर्माण भएको खेलमैदानको सार्वजनिक सुनुवाई आगामी कार्तिक ७ गते गर्ने, वडाभीत्र स्थानीय स्तरका खेलकुदका कार्यक्रम कार्तिक ८ गते देखी गर्ने, वडाको खेलकुदका नाममा रहेको ३ लाख ४० हजार रुपैैयाँ सवैदलिय सर्वपक्षिय छलफलबाट खर्च गर्ने र प्रदेशबाट प्राप्त रकमले बनेको निवनिर्मित खेल मैदान सर्वपक्षियरुपमा उद्घाटन गर्ने गरि सहमति भएको छ । त्रिपक्षीय सहमति भएपछि स्थानीय यूवाहरुले खेल संचालन गर्न दिएका थिए । तर, सहमतिमा भएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् की हुँदैनन हेर्न भने बाँकी छ ।
खेलकुद गराउने विषयमा विवाद चरम उत्सर्गमा पुगेपछि सदरमुकाम दिक्तेलबाट ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पनि खटिएका थिए ।
यो त एउटा उद्धाहरण मात्र हो । हरेक सामाजिक संघसस्थामा राजनीतिकरण मौलाएर गएको छ । संस्थामा राजनीतिककरण नै किन गर्नु पर्यो ? पार्टीकै संघसंगठनबाट पनि यस्ता खालका कार्यक्रम गर्न कुनै गाह्रो छैन् । समाजिक महत्व बोकेका संघसस्थालाई यो बुझ्न जरुरी छ की पार्टी वा राजनीति होईन सामाजिक उत्तरदायित्व । प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाका २२ टिमको सहभागीता रहेको छ । पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद १ लाख र रनिङ कप तथा दोश्रो हुने टिमले ५० हजारका साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताका सेमीफाइनलिष्ट टिमले नगद २०,२० हजार प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै, प्रतियोगताका उत्कृष्ट किपर, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र सर्वा्धिक गोलकर्तालाई ५।५ हजार मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताका अनुशासित टिमलाई १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
२०७६ कार्तिक ४ गते साँझ ५ :१७ मा प्रकाशित